Canada inounza zvido zvitsva zveBoeing 737 MAX kudzokera kubasa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Canada inounza zvido zvitsva zveBoeing 737 MAX kudzokera kubasa
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kutakura Canada yapedza anopfuura anopfuura zviuru gumi nemashanu ekuongorora maawa paBoing 15,000 MAX
Hurumende yeCanada inoramba yakazvipira kuchengetedza maCanada, veruzhinji vanofamba, uye nehurongwa hwekufambisa hwakachengeteka uye hwakachengeteka.
Nhasi, Transport Canada yaburitsa Airworthiness Directive yeiyo Boeing 737 MAX iyo inotsanangura zvinoda kugadziriswa kuti zviitwe nendege isati yadzokera kubasa muCanada airspace. Izvi zvinopedzisa ongororo yedhipatimendi yendege.
Sechikamu cheTransport Canada yekuzvimiririra yekuongorora maitiro, dhipatimendi rezvemagariro ndege uye nyanzvi dzekuchengetedza nendege dzakabatsira mukutungamira shanduko dhizaini yendege. Pamusoro pezvo, iro dhipatimendi rakatomboenda nekurebesa nhanho dzakasarudzika dzeCanada kusimudzira kuchengetedzeka kwendege.
Pamusoro peongororo dzese, uye nekupa mamwe mavimbiso ekuti matanho ese aripo, Chidimbu chenguva pfupi chinoratidza zvakajeka tarisiro yekutakura kweCanada neCanada nezvinodiwa zvekuwedzera kudzidziswa kwenhengo dzevashandi zvakapihwawo kune vanoshanda. Izvo zvinowirirana kune dhizaini uye kugadzirisa zvinodiwa zveAirworthiness Directive.
Sedanho rekupedzisira mune ino nzira, Transport Canada ichasimudza Cherechedzo chiripo kuAirmen (NOTAM) inorambidza mashandiro enhandare muCanada airspace muna Ndira 20, 2021. Izvi zvinobvumidza kudzoka kuzoshanda kwendege muCanada. .
Kutakura Canada yapedza anopfuura anopfuura zviuru gumi nemashanu ekuongorora maawa paBoing 15,000 MAX. Ongororo iyi yakaona Canada ichitora chinzvimbo chakakosha chehutungamiriri muchirongwa chose kubatsira kuumba sarudzo zhinji dzakatorwa nehurumende yezvigadzirwa, United States Federal Aviation Administration (FAA). Izvo zvakare zvakakonzeresa Kutakura Canada kuburitsa yayo yakasarudzika Yekuzvidzivirira Directive zvinopesana nekutorwa kweiyo FAA Airworthiness Directive.
Mukuongorora kwese kwakazvimirira kwedhipatimendi, rakashanda zvakanyanya neFAA nemamwe masimba makuru ekuvimbisa, kusanganisira European Union Aviation Safety Agency (EASA), National Civil Aviation Agency yeBrazil (ANAC), pamwe neCanadaan ndege, vashandi uye masangano emubatanidzwa pakuitwa kwezviyero izvi.
Kuburikidza nezviitiko zvekutarisa, dhipatimendi rakasimbisa kuti vashandisi veCanada vari kuita matanho anodiwa uye vachange vakagadzirira kudzoka kusevhisi yendege mumazuva anotevera nemavhiki. Vanoshanda nendege vekuCanada vakabatanawo mukuvandudza chirongwa chitsva chekudzidzisa. Uye zvakare, sezvo Kutakura Canada kwakabvumidza yakagadziridzwa chirongwa chekudzidzisa chevatatu veCanada Operators musi waZvita 21, 2020, idzi ndege dzanga dzichishingairira kudzidzisa vatyairi vadzo.
"Pamwedzi makumi maviri yadarika, veTransport Canada nyanzvi dzekuchengetedza nendege, nekushinga kwavo uye kunyatsoita, vakave nechokwadi chekuchengetedza kuchengetedzwa kwakaitwa nedhipatimendi. VaCanada neindasitiri yendege vanogona kuva nechokwadi chekuti Transport Canada yakashinga kugadzirisa nyaya dzese dzekuchengetedza isati yabvumidza ndege iyi kuti idzokere kunhandare yendege yeCanada. "
Anokudzwa Omar Alghabra
New Digital Platform yeMiss Universe Makwikwi